बढ्यो सिमेन्टको भाउ, एक तले घर बनाउँदा कति खर्च लाग्छ? :: मिरा खतिवडा :: Setopati
सिमेन्टको मूल्य अझै बढ्न सक्ने
दसैंअघि सिमेन्टको भाउ घटेको थियो। निर्माणको सिजन नभएको र लगातारको वर्षाले सिमेन्ट बजारमा असर पुर्‍याएको उद्योगीहरूको भनाइ थियो।
तर दसैं सकिएलगत्तै उद्योगीले सिमेन्टको भाउ बढाएका छन्। हाल कोइलाको मूल्य आकासिएका कारण सिमेन्टको भाउ बढेको उद्योगीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सिमेन्टका लागि किल्ङ्कर बनाउनुपर्छ। यसका लागि कोइला अत्यन्तै आवश्यक कच्चा पदार्थ हो। हाल कोइलाको मूल्य छ गुणासम्म बढेको अर्घाखाँची सिमेन्टका बजार प्रमुख रमेश थापा बताउँछन्।
'कोइलाको आपूर्ति कम भएको छ, अभाव छ। यसकारण कोइलाको लागत बढ्यो र सिमेन्टको भाउमा असर पर्‍यो,' थापाले प्रस्ट्याए, 'सिमेन्टको मूल्य अझै बढाउने कुरा छ।'
दसैंअघि अर्घाखाँचीले ओपिसी (अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट/छिटो सुक्ने) को भाउ अघिल्लो वर्षको यही समयमाभन्दा बोरामा एक सय रूपैयाँ घटाएर कारोबार गरिरहेको जानकारी दिएको थियो। त्यो बेला अर्घाखाँची ओपिसीको कारखाना मूल्य प्रतिबोरा ६ सय २० रूपैयाँ थियो। भ्याट, ढुवानी खर्च लगायत जोडेर वितरकसम्म पुग्दा ७ सय ६६ रूपैयाँ २५ पैसा हुन्थ्यो। यसमा वितरकले दसदेखि बीस रूपैयाँसम्म नाफा राखेर बिक्री गर्छन्। त्यसैले उपभोक्ताले सात सय ७० देखि सात सय ९० रूपैयाँसम्ममा सिमेन्ट पाइरहेका थिए।
अहिले उद्योगले बोरामा २० रूपैयाँ बढाएको छ। हाल अर्घाखाँची ओपिसीको कारखाना मूल्य नै प्रतिबोरा ६ सय ४० रूपैयाँ पुगेको थापाले जानकारी दिए। उपभोक्तासम्म आइपुग्दा सात सय ९० देखि आठ सय २० रूपैयाँसम्म पर्छ।
थापाका अनुसार केही साताअघिसम्म प्रतिस्पर्धी बजारमा अस्तित्व कायम राख्न मूल्य घटाएर भए पनि आयतन फैलाउनुपर्ने आवश्यकता थियो। अहिले कोइलाको मूल्य र ढुवानी खर्च बढेपछि मूल्य केही हेरफेर गर्नै पर्ने बाध्यता भएको हो।
यसैगरी शिवम् सिमेन्टको मूल्य पनि गत महिनाको तुलनामा ३० देखि ३५ रूपैयाँ बढेको देखिन्छ। गत असोजमा शिवम् सिमेन्टको उपभोक्ता मूल्य सात सय ६५ देखि सात सय ८० रूपैयाँ थियो। हाल बढेर सात सय ९५ देखि आठ सय १५ रूपैयाँ प्रतिबोरा पुगेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ।
एक तले घर बनाउन सिमेन्टमा कति खर्च लाग्छ?
बजारमा मुख्यतः दुईथरी सिमेन्ट पाइन्छ- ओपिसी (अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट) र पिपिसी (पोर्टल्यान्ड पोज्जोलोना सिमेन्ट)।
सिमेन्टका प्रकार, विशेषता र काम गर्ने तरिकाबारे पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
ओपिसी मुख्यगरी ढलान र जगमा प्रयोग हुन्छ। छिटो सुक्ने भएकाले जुन निर्माण चाँडो सक्नुपर्ने वा फर्मा खोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ यो प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै भित्ताहरू प्लास्टरमा पिपिसी प्रयोग हुन्छ। निर्माण समय लामो राखिएको छ भने पिपिसी ढलानमा पनि प्रयोग गर्न सकिने इञ्जिनियरहरू बताउँछन्।
घर बनाउँदा सिमेन्टमा कति खर्च लाग्ला भन्ने धेरैलाई चासो हुन सक्छ। यहाँ हामीले काठमाडौंमा आठ सय वर्गफिटमा बन्ने चार कोठे, एकतले ढलान घर बनाउन चाहिने सिमेन्ट र त्यसको लागतबारे चर्चा गरेका छौं। यसबारे हामीलाई इञ्जिनियर तथा निर्माण कम्पनी 'बिल्ड इनोभेसन' का सिइओ अनोज खतिवडाले जानकारी दिएका छन्।
इञ्जिनियर खतिवडाको काम अनुभवअनुसार अधिकांशले तत्काल एकतले घर बनाए पनि उद्देश्य कम्तीमा तीनतले बनाउने राखेका हुन्छन्। यही आधारमा घरको जग बलियो बनाउँछन्। यसले गर्दा एकतले घरको लागत बढ्छ।
'अहिले एकतले मात्रै बनाए पनि पछि तला थप्ने सोचेर धेरैले जग त्यहीअनुसार बलियो बनाउँछन्,' ग्राहकको मनासायबारे उनी भन्छन्, 'त्यसैले पछि थपिने तलाको तुलनामा पहिलो तलामा सिमेन्टको लागत धेरै पर्छ।'
घरको जग, पिलर र ढलानमा छिटो सुक्ने र पकड लिने भएकाले ओपिसी प्रयोग हुन्छ। खतिवडाका अनुसार आठ सय वर्गफिटमा बन्ने घरका लागि करिब तीन सय पचास बोरा ओपिसी अनुमान गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्लास्टर, जोडाइ र फिनिसिङमा करिब तीन सय पचास बोरा नै पिपिसी लाग्छ।
यसरी आठ सय वर्गफिटमा बन्ने चार कोठाको एकतले घरमा ओपिसी र पिपसी गरी करिब सात सय बोरा सिमेन्ट लाग्छ।
अब अहिले बढेको मूल्यअनुसार हेर्ने हो भने ओपिसीको बजारमूल्य प्रतिबोरा सात सय ९५ देखि आठ सय २० रूपैयाँसम्म छ। त्यस्तै प्रतिबोरा छ सयदेखि सात सय पचास रूपैयाँसम्म पिपिसी पाइन्छ।
यो हिसाबले चार तले घर बनाउन ओपिसीमा दुई लाख ८० हजारदेखि दुई लाख ९० हजार रूपैयाँसम्म खर्च हुन्छ।
त्यस्तै पिपिसीमा दुई लाख १० हजारदेखि दुई लाख ६३ हजार रूपैयाँसम्म लाग्न सक्छ।
माथिको मूल्य र आवश्यक सिमेन्ट मात्रालाई आधार मान्दा चार कोठाको एकतले घर बनाउन दुवैथरी सिमेन्टमा करिब पाँच लाखदेखि पाँच लाख ५५ हजार रूपैयाँसम्म खर्च हुन्छ।
यो अनुमानित लागत हो। निर्माणमा दस–बीस बोरा तलमाथि पर्न सक्छ। इञ्जिनियर खतिवडाले प्रस्ट्याए, 'पिलर र बिमको आकारले पनि सिमेन्ट कति चाहिन्छ भन्नेमा अलिकति फरक पार्छ। नौ वटा पिलर र बाह्र वटा पिलर राख्दा लगानी तलमाथि पर्छ।'
उनकाअनुसार तला थप्न मिल्ने बलियो जग राख्ने तर छत ढलान नगर्ने हो भने दुई सय बोरासम्म सिमेन्ट कम लाग्छ।
सिमेन्ट किन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्?
सामान्यतया सिमेन्ट बनेको मितिबाट तीन महिनाभित्र प्रयोग गर्नुपर्छ। सिमेन्टको मिति हेर्न अरू उत्पादनभन्दा अलि फरक छ। यसमा हप्ताअनुसार मिति लेखिएको हुन्छ।
यदि सिमेन्ट २०७७ साल वैशाख पहिलो हप्तामा बनेको छ भने यसमा २०७७ र १ लेखिएको हुन्छ।
त्यस्तै जेठको पहिलो हप्तामा बनेको भए २०७७ र ५ लेखिएको हुन्छ।
यसको अर्थ यो सिमेन्ट २०७७ सालको ५ औं हप्तामा बनेको हो। यो मितिबाट तीन महिनाभित्र उक्त सिमेन्ट प्रयोग गरिसक्नुपर्छ।
त्यसैगरी सिमेन्टको बोरा ठीक छ कि छैन, त्यो पनि हेर्नुपर्छ। बोरा प्वाल परेको भए सिमेन्ट कम हुन पनि सक्छ। अनि संरचना बनाउँदा स्थलमा ल्याएको सिमेन्ट ओस नपर्ने ठाउँमा भण्डारण गर्नुपर्छ। भण्डारण गर्दा भुइँमा काठको फलेक वा चिसो रोक्ने सामान ओछ्याउनुपर्छ।
त्यस्तै पानी पर्दा भण्डारण गरिएको कोठामा पानी पस्छ कि पस्दैन भनेर पनि चनाखो हुनुपर्छ। पानी पसेमा सिमेन्टको गुणस्तरमा ह्रास आउनुका साथै प्रयोग गर्नै नमिल्न सक्छ। यस्तो सिमेन्ट प्रयोग गरे उक्किने वा संरचना नै कमजोर हुने समस्या आउँछ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः कोठामा वालपेपर राख्न कति खर्च लाग्छ? के छ फाइदा?
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक ११, २०७८, ०४:२५:००
मोडुलर किचन बनाउन कति लाग्छ खर्च? के छ यसको विशेषता?
शिवम् सिमेन्टले गर्यो प्रदेश २ का एकहजार बढी निर्माणकर्मीसँग अन्तरक्रिया
शौर्य सिमेन्ट अब ५३ ग्रेडबाट मान्यता प्राप्त